Iinqwelomoya zaseRussia ziye zavula inqwelomoya ukuya kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kuLwandle oluBomvu eSharm El Sheikh naseHurghada
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » Iinqwelomoya zaseRussia ziye zavula inqwelomoya ukuya kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kuLwandle oluBomvu eSharm El Sheikh naseHurghada
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelo-moya ze-Aeroflot kunye ne-S7 ziya kuphehlelela iinqwelo-moya ezisuka eMoscow, eRossiya, esele ibhabha isiya e-Egypt, iya kwandisa ukuhamba kweenqwelo moya rhoqo. I-Ural Airlines, iAzur yomoya, iNordwind, iIkar, iiWings Red, i-S7, kunye neYamal bazakwazisa ngeenqwelomoya ezivela kulo mmandla.
Umlawuli wezokundiza waseRussia ugunyazisa inqwelomoya ye9 ukuba iphumeze iinqwelomoya zase-Egypt.
Ukucwangciswa kweenqwelomoya ukuya eHurghada naseSharm El Sheik ukumiliselwa kwiveki okanye ezimbini.
Iinqwelo moya ziya kudinga ubuncinci iveki ukwazisa ukuthengisa kunye nokwenza uthungelwano lweenqwelo moya.
I-Arhente yoMkhosi Wezothutho Womoya wase-Russia ibhengeze namhlanje ukuba i-9 yenqwelomoya eya kugunyaziswa ukuba iqale iinqwelomoya ezihleliweyo zisuka eRashiya ziye kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kuLwandle oluBomvu e-Hurghada naseSharm El Sheikh.
“Iinqwelo-moya ziya kunikwa ilungelo lokusebenza ngenqwelomoya enye ngeveki kwindlela nganye eya eHurghada naseSharm EL Sheikh. Kwakhona kwiindlela zaseMoscow - eHurghada naseMoscow - uSharm El Sheikh, inani leenqwelo-moya lenyuka ukusuka kwiinqwelomoya ezintlanu ukuya kwezili-5 ngeveki, ”utshilo umlawuli wezokundiza waseRussia.
Aeroflot Iinqwelo-moya ze-S7 ziya kuphehlelela iinqwelo-moya ezisuka eMoscow, RossiyaSele ibhabha isiya eYiphutha, iya kwandisa ukuphindaphindeka kweenqwelomoya. I-Ural Airlines, iAzur yomoya, iNordwind, iIkar, iiWings Red, i-S7 kunye neYamal ziya kuphehlelela iinqwelomoya ezivela kwimimandla.
Nangona kunjalo, iinqwelomoya zaseRussia ziya kudinga ubuncinci iveki ukumilisela iindiza ezintsha eziya e-Egypt. Abaphathi baya kufuna ixesha lokwazisa ukuthengisa kunye nokwenza inethiwekhi yeenqwelomoya.
"Iinqwelomoya zaseRussia azizukuvula iindiza ezintsha eziya e-Egypt kungekudala, izabelo ziye zahanjiswa izolo kuphela - abathwali baya kudinga ubuncinci iveki ukuqala ukuthengisa nokwenza ishedyuli," latsho igosa le-arhente.
Kunye nokuphakamisa ukonyusa inani leenqwelo moya eziya rhoqo e-Egypt, i-Arhente yoThutho loMoya yaseRussia ikwazisa ukuqala kweenqwelomoya kwilizwe.
"Iarhente isebenza nabasemagunyeni abanomdla wokungenisa izindululo kwikomkhulu lokusebenza ukwandisa inani leenqwelomoya kunye nokuqala kweenqwelomoya kwiidolophu zase-Egypt, eMoscow nakweminye imimandla yelizwe," yatsho ingxelo ye-arhente. .